Marobe ny fiarahabana ny mpanjakavavy Rania noho izy nahazo ny Loka “Visionary” Youtube · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Janoary 2019 3:53 GMT
(Lahatsorara teny Anglisy efa tamin'ny volana Novambra 2008)
Tamin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe ‘Why I love Queen Rania?’ (Nahoana aho no tia ny Mpanjakavavyan'i Queen Rania?”‘, Hoy i Moey, bilaogera Jordaniana hoe:
Angamba satria izy no tsara tarehy indrindra hatramin'izay ary fantany ny marika tokony hoentina sy izay tokony hanaovana, na angamba noho izy nahazo ny loka Visionary YouTube Live. Tsy mbola azoko antoka, fa tia azy fotsiny aho
Andaluss, avy any Maraoka, nanamarika hoe:
Sendra ny fantsona Youtube nataon'ny mpanjakavavy Rania aho. Toa efa nanao bilaogy an-dahatsary hatramin'ny taona 2007 izy, ary manana iraka; manakana ny fitsarana an-tendrony manodidina ny Arabo & ny Miozolomana manerana izao tontolo izao. Manana valinteny lahatsary maro izy izay azonao jerena ao amin'ny fantsona Youtube. Ary vao nahazo loka youtube izy.
Ny zava-mampalahelo na dia tsy takatry ny olona fa ny silamo no namorona ny: taratasy, ny shampoing, ny ranomainty, ny kafe, ny echecs (eny, famoronana nataon'ny arabo ny echecs), ny kamera misy lavaka kely (pin-hole), ny vakisiny, ny fandidiana, ny lasopy, tany amin'ny endrika boribory, ny kalandrie, ny tarehimarika .. raha tsy hilaza afa-tsy vitsivitsy !! Midira google & dia hahita maromaro kokoa.
Avy any Israely, One Voice, hetsika fandriampahalemana nanoratra tao amin'ny bilaoginy, nilaza hoe::
Ny Mpanjaka Rania any Jordana no nomena ny voninahitra loka Visionary voalohany amin'ny YouTube, noho ny fanentanany ny tanora, mandrisika azy ireo hiatrika sy hamongotra ny fitsarana an-tendrony momba ny tontolon'ny silamo. Mahagaga antsika hatrany ny herim-pony, ny vina tao aminy ary ny fitarihany.
“Nametraka ny fenitra ho amin'ny famongorana ireo fitsarana an-tendrony ny mpanjakavavy Rania ary tena manome aingam-panahy ny horonan-tsariny YouTube”, hoy i Al-Arabiya nanonona ny mpiara-manorina ny Youtube, Chad Hurley. “Fifaliana sy voninahitra ny manolotra azy ity fanomezam-boninahitra mendrika loatra ity.”
Avy any Palestina ihany, the Philistine nanoratra hoe:
Mety hoe mpanjakavavin'ny tany fahiny izy. Saingy tamin'ity herinandro ity, dia nipoitra ny teny hoe “ny Mpanjakavavy Rania ao Jordania no mpandresy tamin'ny fanomezam-boninahitra miavaka taonjato faha-21. Nomena ny loka Visionary voalohany amin'ny Youtube izy noho ny fananganana fantsom-pifandraisana an-tserasera hiadiana amin'ny fitsarana an-tendrony sy ny hevi-diso mikasika ny Arabo sy ny Silamo, hoy ny tatitry ny masoivohom-baovao Petra Jordaniana.
Mpiserasera maherin'ny 1 tapitrisa no nijery ny lahatsariny, “Alefaso aty amiko ny fitsaranao an-tendrony,”. Lahatsary iray hafa kosa nahazo mpijery 1,4 tapitrisa tao anatin'ny herinandro maromaro, ka nahatonga ireo valindahatsary 83 avy amin'ny mpiserasera hafa, ary niteraka fanehoan-kevitra efa ho 6.000.
Ary farany, avy ao amin'ny fanjakan'ny mpanjakavavy, Jansait nandefa ilay lahatsary izay navoakan'ny Mpanjakavavy ary nanoratra ity andalana ity:
Matanjaka kokoa isika rehefa mihaino, Marani-tsaina kokoa rehefa mizara